Bulshada Rayidka ah oo soo dhaweysay la dagallanka musuqmaasuqa – Radio Muqdisho
Bulshada Rayidka ah oo soo dhaweysay la dagallanka musuqmaasuqa
Qaar ka mid ah ururrada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey tallaabada xafiiska Hanti dhowraha guud ee ku aaddan la dagaallanka musuq-maasuqa iyo la Xisaabtanka hey’daha dowladda.
C/llaahi Maxamed Shirwac oo ah guddoomiyaha hey’adda ururrada Bulshada Rayidka ee bartaha iyo Koonfurta Soomaaliya, ayaa sheegay in tallaabadaani ay tahay mid salka u dhigayso maamulka wanaagsan ee hey’adaha dowladda iyo xasiloonida Siyaasadeed ee Somalia ayadoo loo marayo isla-xisaabtan.
Shalay ayaa magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay raashin deeq ahaa oo la leexsaday, ayadoo gacanta lagu dhigay afar qof oo doonayay inay raashinkaas ka ganacsadaan. Raashinkaan ayaa loogu talo galay dadka danyarta ah ee ku nool gobolka Hiiraan.
Dhanka kale Shacabka iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa soo dhoweeyey tallaabadan, ayagoo tilmaamay in wax laga xumaado ay tahay in la dhaco raashin loogu talo galay in lagu caawiyo dadka ay abaaraha iyo xayiraadda Al-Shabaab ay saameeyeen ee ku sugan gobollada dalka qaarkood.
Baarlamaanka oo laga codsaday inay codka kalsoonida ah siiyaan golaha Wasiirada cusub